Home » Lahatsoratra mampiavaka » UNWTO: “toe-javatra tsy azo inoana” hoy i Taleb Rifai momba ilay voatendry an'i Zurab Pololikashvili ho an'ny sekretera jeneraly?
I El Salvador sy Honduras no firenena mpandray vahiny amin'ny fivoriana faha-61 an'ny Vaomieram-paritra ho an'ny Amerikana an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO) amin'ity herinandro ity.
Ny fandaharam-potoana faha-30-31 mey 12 ao amin'ny fandaharam-potoana dia ny fanomanana ny fivoriana faha-22 ho avy ny fivorian'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana momba ny fizahan-tany ataon'ny Firenena Mikambana ao amin'ny Hotely Intercontinental City any Chengdu, Sina. Hihaona amin'ny 11-16 septambra 2017 ny Fihaonambe.
Tamin'ny fivorian'ny filankevi-pitantanan'ny UNWTO izay natao tao Madrid, dia nifidy ny hanendry ny maso ivoho Zurab Pololikashvili avy any Georgia ho sekretera jeneralin'ny UNWTO manaraka. Ity fanoloran-tena ity dia tokony hamafisin'ny General Assembly ao Chengdu miaraka amina ampahatelon'ny maro an'isa izay manatrika firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO.
Taloha dia natao tamin'ny fifidianana malalaka izany, fa ny fanendrena ny masoivoho Pololikashvili dia tsy hoe tsy misy adihevitra.
Omaly ny sekretera jeneraly ankehitriny Dr.Taleb Rifai dia nilaza eTurboNews izay eritreretiny: “Tsy manana antony inoana isika fa tsy hanamafy ny olom-boafidy ny Fivoriambe. Tahaka ny efa nisy hatrizay, ilay kandidà natolotry ny Executive Council, mino izahay fa hohamafisin'ny GA. Amin'ny "toe-javatra tsy ampoizina", tsy izany no izy, avy eo ny andraikitry ny GA, amin'ny maha organo lehibe indrindra an'ny UNWTO, no manapa-kevitra amin'ny dingana manaraka. "
eTurboNews Nahazo fanehoan-kevitra be dia be milaza ny fanamafisana tsy ho tsy misy tolona amin'ity indray mitoraka ity. Ny fanehoan-kevitra toy izany dia misy ny fiampangana ny fanapahana fifanarahana tsy etika ataon'ny minisitera vahiny na filoham-panjakana miaraka amin'i Georgia tsy misy ifandraisany amin'ny dia sy fizahan-tany ary ho takalon'ny vato. Tafiditra ao anatin'izany ny fitoriana mety ho avy manohitra ny fanapahan-kevitry ny mpanatanteraka. Tafiditra ao anatin'izany ny fiampangana ny fidirana tsy ara-drariny sy ny tsolotra.
Izy io aza dia ahitana ny teoria tsikombakomban'i Henry D Gombya, mpitati-baovao avy ao amin'ny London Evening Post dia miampanga. Navoakany androany ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny fanendrena sekretera jeneralin'ny UNWTO dia nokasaina hatao fanamby ara-dalàna any Chengdu - Sina" ary manazava ny teoria momba ny firaisana tsikombakomba misy eo amin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO ankehitriny Taleb Rifai sy ilay voatendry Zurab Pololikashvili. Nanoratra tao amin'ny lahatsorany izy fa ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia efa nanapa-kevitra efa ela talohan'ny nisehoan'ny kandidà iray. eTN mahatsapa teboka maro voalaza fa "nomena" tao amin'ny lahatsoratra London Evening Post tsy azo porofoina amin'izao fotoana izao. Ny lahatsoratra farafaharatsiny farafaharatsiny dia maneho ny fisavoritahana sy fahasosorana amin'ny toe-javatra manodidina ny fifidianana Sekretera jeneralin'ny UNWTO.
Ny kolikoly angamba no karazana kolikoly malaza indrindra. Any amin'ny firenena maro, ny orinasa ankehitriny dia azo enjehina noho ny fanaovana kolikoly toy ny fanolorana tapakila maimaimpoana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny hetsika amin'ny hetsika.
Ny fahazoana kolikoly ho takalon'ny vato dia zava-misy mampalahelo tsy amin'ny governemanta ihany fa amin'ny fikambanana manerantany anisan'izany ny FIFA.
Tamin'ny 10 May 2017 nandresy tamin'ny 2: 1 i Atletico Madrid tamin'ny Real Madrid tamin'ny lalao Football League Semi-Final Football tany Vicente Calderon Stadium Madrid. Ny 10 Mey 2017 koa no andro voalohany nananganana fivoriana tao amin'ny Hotel Melia Castilla Madrid tao Madrid ny mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka UNWTO. Ny olana lehibe indrindra ho an'ny filankevitra tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia ny fifidianana sekretera jeneraly vaovao. Ny andron'ny fifidianana dia ny 12 Mey, andro farany tamin'ny fivorian'ny filankevitra ambony.
Ny Kandidà Zeorziana Zurab Pololikashvili dia mpikambana ao amin'ny Real Madrid ary araka ny CV nataony dia CEO an'ny FC Dinamo Tbilisi izy nandritra ny 10 taona, tamin'ny 2001-2011. Dinamo Tbilisi no ekipa mpilalao baolina kitra matihanina any Georgia.
Tsy misy fisalasalana, ny maso ivoho Pololikashvil dia tia baolina kitra ary fantany ny fomba ahafahan'ny fanahin'ny fifamatorana amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena hahatonga azy hanakaiky kokoa ny olona tokony hampiaiky volana azy. Ny fandinihana iray natao tamin'ny 2007 nataon'ny University of Alberta ao Edmonton dia mahita fa ny fanatanjahan-tena no mampiorina ny finamanana. Ny masoivoho Pololikasvil dia mila naka mpikambana mpanatanteraka ao amin'ny “ekipan'ny namany.”
Amin'ny maha mpikambana ao amin'ny ekipa baolina kitra Real Madrid azy, ny ambasadaoro Pololikashvil dia afaka nanao izay tsy azo natao. Nahazo andiana tapakila ho an'ity lalao baolina kitra amidy ity izy.
Iza no tiany hizara tapakila toy izany? Mazava ho azy fa mizara tapakila amin'ny fianakavianao, mpiara-miasa aminao ianao, namana akaiky anao na amin'ireo izay manan-danja aminao ary te-ho sakaiza ianao.
Iza no zava-dehibe ho an'ny Ambasadaoro Pololikashvi tamin'ny 10 Mey? Ny mpikambana ao amin'ny Filan-kevi-pitantanana dia mety ho teo an-tampon'ny lisitra toy izany.
Raha ny loharanom-baovao iray avy ao amin'ny fiarahamonina diplomatika ao Madrid dia nanomboka niasa ireo tompon'andraikitra misahana ny masoivoho Zeorziana tao Madrid ary nanasa ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka UNWTO voafantina izay afaka hiaraka amin'ny mpilatsaka hofidina Ambasadaoro Pololikashvi amin'ny lalao baolina kitra Real Madrid amin'ny 10 Mey.
Tapakilanà tapakila iray no natolotry ny tompon'andraikitra Zeorziana minitra farany tany amin'ny masoivoho any Madrid. Nankany amin'ny masoivoho misolo tena firenena izay mitsikera mafy ny hisian'ny fifidianana ny kandidà Zeorziana. Nankany amin'ny masoivoho firenena izay mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka UNWTO.
Ahoana no fomba handikana ny fanekena ny tapakila toy izany nomen'ny masoivohon'ny Zeorziana Pololikashvi?
Nitranga izany nandritra ny fivorian'ny UN izay mitohy. Nitranga izany rehefa be ny tsatòka ka iza no ho voafidy ho mpitondra manaraka ny tontolon'ny fizahan-tany?
Nitranga izany raha nisy kandida 4 hafa nanao fampielezan-kevitra ary nanazava ny fandaharam-potoanany momba ny fomba fanatsarana ny fizahan-tany manerantany.
Ny lalao baolina kitra ve dia alina fotsiny niaraka tamin'ny namanao? Mila jerena hoe iza ireo "namana" ireo - ary izany dia ho an'ny lahatsoratra iray atsy ho atsy.
Ny filohan'ny filankevitra ambony ao Madrid dia ny minisitry ny kolontsaina sy ny fizahantany any Azerbaijan, Abulfas Garaye. Misy fanontaniana roa mirehitra?
1) Ny mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka ve dia nanambara tamin'ny talohan'ny fifidianana izay efa nahazo tapakila na fanasana ho an'ny lalao baolina kitra avy amin'ny Kandida Zeorziana na ny Masoivoho Zeorziana izy ireo na ekena na tsia io fanasana io?
2) Ny mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka na izay tafiditra amin'ny fizotran'ny fifidianana dia nanambara mialoha ny fifidianana fa fantany ny momba ny hafa manatrika ny lalao na ny hafa efa nahazo tapakila na fanasana avy any Georgia?
Raha eny, tsy tokony nandroso tamin'ny alàlan'ny latsa-bato na farafaharatsiny nampitandrina ny mpifidy i Abulfas Garaye?
eTurboNews nametraka fanontaniana toy izany ihany koa tamin'ny mpikambana ao amin'ny Executive Executive sy ny mpirotsaka hofidina ary manana valiny mahagaga hahaliana azy ireo hozaraina amin'ny mpamaky ato ho ato. eTurboNews nametraka ity fanontaniana ity tamin'ny olom-boatendry Zeorziana koa. Tsy nisy valiny.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana manokana momba ny lalàna any amin'ny firenena mpanatanteraka maro dia tokony ho adidy sy fepetra ara-dalàna izany.
Raha dinihina ary ara-drariny izany rehetra izany, tsy tokony hanomana ny fivorian'ny fivoriamben'ny vondrom-bahoakam-paritra ho an'ny "toe-javatra mety tsy ampoizina" ny fivorian'ny 61 an'ny Komisim-paritry ny Amerikanina an'ny Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO)?
Amin'izao fotoana izao, ny fitsipiky ny UNWTO dia milaza fotsiny fa ny General Assembly no manapa-kevitra amin'ny dingana manaraka raha sendra lavina izy ireo. Ny fepetra toy izany dia tsy voafaritra ary mety hiteraka korontana sy korontana amin'ny minitra farany lasa raha toa ka misy ny "toe-javatra tsy ampoizina".
Ny fotoam-pivoriana faha-106 sy faha-107 an'ny UNWTO Executive Council dia hotontosaina amin'ny volana septambra 2017 any Chengdu, Sina ao anatin'ny rafitry ny fivorian'ny UNWTO General 22nd. Ny fivoriana faha-106 dia hifidy ny filankevitra mpanatanteraka vaovao alohan'ny hanombohan'ny fivoriambe. Aorian'ny famaranana ny General Assembly, ny Birao Mpanatanteraka izay voafidy dia hivory mandritra ny fivoriana faha-107 ao Chengdu
Ahoana ny fametrahana mekanika amin'ny fomba ahafahan'ny fifidianana vaovao ho sekretera jeneraly mandroso raha misy fiangonana GA mandà olona voatendry? Tsy tokony ho teboka fifanakalozan-kevitra ao amin'ny Vaomieram-paritra ho an'ny Amerikana ve ity herinandro ity?